Indlela yokwenza uzimele Gypsum ibhodi kusukela amashidi metal ophahleni noma izindonga?
Isakhiwo Uhlaka kuyinto uhlobo eyinhloko ukukhweza okwakhiwa ngalo la mabhodi odongeni noma ophahleni ebusweni. Le misebenzi kungenziwa ngokuthi ukwakhiwa entsha uhlobo odongeni ifremu. Ngenxa yokuthi ibhodi Gypsum has a isisindo ezithile isimangalo likhreyithi okuyinto aqukethe e rigidity namandla. Nokho kungabi ngakho eside isikhathi ifreyimu Yakhiwa imigoqo sokhuni, owawunesihloko uhlobo emapheshana. Nokho, lobu buchwepheshe bungasekho, njengoba kwathathelwa indawo eliphezulu izinto - amaphrofayli metal.
Kungani uzimele wenziwe ngokhuni
Nokho, asetshenziswa ngisho namuhla slats, kodwa kuyaqabukela. Ngemva ukhuni eshintsha Ubukhulu yayo yasekuqaleni komugqa ngaphansi kwethonya lokushisa kanye nomswakama. Bruschi ufa, sikhuntile futhi aqhephukile. Ezindaweni ezinomswakama, basuke zikhubazekile. Zonke lezi nemiphumela ethile engathandeki bengekho ngokuphelele futhi iphrofayli metal, ngakho manje sekuyindlela impahla esiyinhloko ukwakhiwa uzimele Gypsum ebhodini.
amaphrofayli Lesitshalo lohlaka
Uma ufuna ukwakha uhlaka amaphrofayli metal ngoba Gypsum ibhodi, kubalulekile ukubhekana nezinhlobo zalo eziyisisekelo, ngamunye ephethe injongo yawo. Ngokwesibonelo, iphrofayli Umhlahlandlela is esifushanisiwe Mon. Lolu hlobo umkhiqizo isetshenziswa ukuze kwakhiwe nentaba lath. It eqondiswa ophahleni, phansi kanye izindonga. Ifomu U emise sephrofayela, futhi imilenze of zosayizi ojwayelekile, okuyinto ilingana 40 mm. Shelf badle osayizi ezisukela 50 kuya ku-100 mm.
Iphrofayela yokubeka okhonjiswe izincwadi ezimbili - IHU futhi limelela Umhlahlandlela efanayo. Umklamo ineziteshi longitudinal ukuthi ukwandisa rigidity sephrofayela. Ububanzi imilenze uyalingana 50 mm, kuyilapho flange babe izilinganiso zobukhulu efanayo njengoba kwaba njalo endabeni engenhla. Kusebenza iphrofayli ekhethelwe isakhiwo Uhlaka obondeni.
Kukhona ophahleni iphrofayela PP ne anemifantu longitudinal, Ubukhulu bayo ayalingana 60x27 mm. Umhlahlandlela ophahleni iphrofayli - esetshenziselwa iluphu izakhiwo ngaphansi isakhiwo ukumiswa. It is okhonjiswe ezintathu izinhlamvu PNP futhi unamahlangothi ka 27x28 mm. Iphrofayela Corner isetshenziswa uma kukhona isidingo sokwenza isakhiwo ayizindunduma lapha ingase ihlanganise niches futhi izingubo zokugqoka esakhelwe ngaphakathi. I isici perforated, futhi engela salo 85 °. Iphrofayela kungenzeka yangaphakathi noma yangaphandle. Eyokwakha ukuvuleka lwaleli uhlobo kudingeka iphrofayili arched, kuyinto ngawo kungenzeka ukwakha isakhiwo inamagquma ophahleni.
Ukuze imikhiqizo core kungenziwa wanezela ukumiswa ngqo yokubeka nophahla amaphrofayli zabo benzelwe kuya ophahleni nezindonga. Ngosizo lwabo isakhiwo ukumiswa kungadalwa ophahleni. Esinye isici, okuyinto uba umdlalo olukhethekile crab, nge okuyinto kungenzeka ukuxhuma amaphrofayli eziningana ngesinye isikhathi. Uma unquma ukwakha uhlaka amaphrofayli metal ngoba Gypsum ibhodi, uzodinga ngezikulufo. On ukudayiswa ungathola izinhlobo eziningana iziqobosho, ngamunye ephethe injongo yawo. Ukuze lokhuni odongeni nezikulufi zisetshenziswa ne izinhlangothi ezilandelayo: 6x70 noma 6x80 mm. Ukuze izindonga kakhonkolo kungcono ukusebenzisa ngezikulufo nge dowels plastic noma Imigudu. Uma kukhona isidingo ukuxhuma amaphrofayli komunye nomunye, kufanele Thenga nge ngezikulufo, izimbungulu, lapho abantu abavamile abizwa "imbewu" "namazeze".
Uma unquma ukufaka amaphrofayli Metal ngoba Gypsum ibhodi, kubalulekile ukuba Thenga kakhulu ezithile zokwakha kanye namathuluzi, kufaka:
ukufakwa kokumqoka kuphela;
Njengoba yokulinganisa zomculo enze roulette kanye sikwele. Ngo isinyathelo ukulungiselela ezidingekayo ukuze sifeze kophawu. Kusukela leli nani imfucuza kuzoncika, kanye namandla kwesakhiwo. Uma le ndlela ibe angahluleli ngendlela eqondile, khona-ke thatha izinto ize.
Ukufaka Uhlaka ophahleni
Uma unquma ukudala uzimele Gypsum ibhodi kusukela amashidi metal, kubalulekile ukuba uqale kusukela ophahleni. Lokhu ebusweni has engeli akuvamile alinganayo. Uma uqala ezindongeni ke silingane Ubukhulu kuyoba nzima ngempela. Ngokuhamba kwesikhathi, cishe Kuyozwakala semali imfucuza. Esikhathini master esigabeni sokuqala inquma ekhoneni ephansi egumbini. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa ithephu ngawo ukukala ibanga kusukela kuphansi kusiya ophahleni kuwo wonke amagumbi. Imiphumela kuqhathaniswa nobukhulu kulencane kuzoba yinani ukuthi okudingayo. Le ndlela lingase lithathwe njengendlela nsuku, uma phansi esiye pre-siqondile. Ikhona esikhethiwe eduze ophahleni kumele isethwe ezingeni laser. Indawo ziyonquma ukuphakama isakhiwo okwesikhashana. imisebe yokukhanya abonisa nentaba okuzokwenziwa etholakala indiza ovundlile. Ngenxa yalesi wokugubha titawusungulwa kanye PPP.
Lapho uhlaka isethwe ngaphansi amashidi zensimbi okwakhiwa ngalo la mabhodi ophahleni, kufanele kukhunjulwe ukuthi esikhathini uhlangothi olude okuyinto perpendicular odongeni lapho iwindi kufanele afakwe okwakhiwa ngalo la mabhodi amashidi. Uma sikhuluma ikamelo sikwele, panel kumelwe ibekwe ku ohlangothini olufanayo ewindini.
Le ndlela yokwenza umsebenzi
Ukukhweza isakhiwo ezifana luhlaka metal amashidi Gypsum ibhodi, ngezandla zakhe ku esigabeni esilandelayo kuhilela ukufakwa PP, lokhu kufanele zisetshenziswe emigqeni ophahleni ngokulinganisa. Ukusebenza kumele kuqale esuka odongeni eside, ibanga phakathi izakhi kufanele kube cm 60. Lokhu kungenxa ububanzi Gypsum ibhodi, okuyinto 120 cm. Ngaphansi web ngamunye 3 kufanele usethe iphrofayli, enye yazo kumele itholakale phakathi.
Kubalulekile ukuba acabangele isikhathi ukuthi panel ezimbili eduze kumele ibekwe zephrofayela yomsebenzisi. Wesithombe ekhasini iphuzu ophahleni ukuze abahlala engxenyeni ephakathi ye iphrofayli. Njalo cm 40 okuphathelene nalezi zimo kukhona isethi ukumiswa. Ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze ugcwalise lesi zokukhwabanisa, ungakwazi ukuqhubeka ukufaka iphrofayli, imikhawulo okuzokwenziwa esekelwe PPP. Uma udala metal plasterboard Uhlaka, kufanele sikhumbule ukuthi amaphrofayli ngeke ehle ngaphansi isisindo ayo. Phakathi umhlahlandlela udinga zidonsa imigqa embalwa intambo eqinile, okuzodala indiza ovundlile. On futhi bayilungisa PP, ngemva isidingo ukusebenzisa ukumiswa kokungathembeki.
Tu- ngaphesheya ukumiswa iphrofayela izimpondo kudingeka sigobe phezulu. Ukuze umklamo waphenduka obuqinile, kufanele ufake i-cross, zenziwa PP. Ibanga phakathi amaphrofayli kuyoba ezifanayo, futhi kuyoba cm 60. Ezivundlile ahlelwe eduze ekamelweni, Isikhala phakathi kwabo zingahluka phakathi 30 kuya ku-60 cm. Isebenzisa crab, it is ogibele phezulu PP, okungukuthi endaweni lapho ukuxhumeka crossmembers. Ukuze ukulungisa ukusetshenziswa namazeze.
Ukufaka ifreyimu odongeni
Ngaphambi Uhlaka efakwe ngaphansi amashidi zensimbi okwakhiwa ngalo la mabhodi ezindongeni, kubalulekile ukuba eqeda umsebenzi kagesi. Izintambo kufanele uziyise Izitolo ngamaphuzu ukukhanyisa ukubekwa, kanye wesifunda amadlambi namadivayisi yasendlini. Ubuchwepheshe imisebenzi lihlukile ukufakwa isakhiwo ophahleni. Udinga ukuhlobisa udonga, ukufaka imininingwane yabo nama plasterboard, kuphela ngemva kokuqala umsebenzi kwenye odongeni. Uma lenzelwe ukubonisa ezinye vimbela ukuhlangana izindonga, amaphrofayli mpo ezifakiwe nge onqenqemeni kusukela phansi kwamanzi, ibanga kufanele kube 5 cm.
Ububanzi sill Kubalulekile futhi uma sekugcineni iqala ngemuva kokufaka. Ngemva kokuphawula Kwenziwa iwindi. Kubalulekile ukuba acabangele futhi ukushuba we ishidi, okungase ukuba alingane kumkhawulo 9.5 kuya 12,5 mm. Ngaphezu kwalokho, kudingeka wenze sikwele, ungakhohlwa mayelana 5 cm. I manipulations efanayo kuyenziwa, ngakolunye uhlangothi ukuvulwa. Imisebenzi kufanele ifakwe ku-ubuchwepheshe obufanayo, uma egumbini amafasitela eziningana. Mark izobonisa indawo emaphethelweni uzimele. Kulesi sigaba, neMo kungenziwa nasezinsikeni phansi sill, kulesi simo, ibanga phakathi uprights ilingana cm 60.
Ngalolo inothi esithile
Level lisetshenzisiwe uphawu, base zidluliselwa ku-izinhlangothi sill. Ukusebenzisa ezingeni, uzophawula onqenqemeni isimo ophahleni futhi phansi. Ukuze ukufakwa isakhiwo metal ozofakwa imitha ezimbili-level, ngawo uzothola amanani esinembile. Lapho uhlaka isethwe ngaphansi amashidi zensimbi okwakhiwa ngalo la mabhodi, olandelayo isigaba emamaki phansi kanye ophahleni Kumele uxhumeke, ngokuvumelana imigqa wathola esungulwe eqondisa iphrofayli. SS kufanele usethe ezinhlangothini iwindi, ngakho kufanele kumakwe ngokuthi ibanga mpo cm 60 kusukela lezi amaphrofayli. Omunye wabo kufanele afakwe kamelo. Ukumisa kumele efakwe ngokusebenzisa ngamunye cm 70, begxilile kufanele ubekwe umugqa.
I komzila yokubeka ezifakiwe amaphrofayli, inkatho yabo isilinganiso kufanele kuhambisane izimpawu phezu phansi kanye ophahleni. Izinga umoya zingalawulwa ngumuntu base mpo ophahleni futhi phansi. In the isinyathelo esilandelayo, lokugcina kokungathembeki ngezikulufo. Ngaphambi kokuba uqale uzimele wakho isikimu umsebenzi kufanele lwentiwe metal amaphepha okwakhiwa ngalo la mabhodi, uyosusa iphutha.
Manje, ibha lingasethwa nge crab, ukunakekelwa okukhethekile kufanele zikhokhelwe ukufakwa endaweni window. Jumper, elise kufanele afakwe nendawo ngaphezu ukuvulwa. Ngemva kokufaka kuqedile, uzimele odongeni kubalulekile ukudweba indawo transverse kanye amaphrofayli longitudinal. Isikimu kungase kudingeke uma esikhathini esizayo phezu kodonga kuzodingeka isithombe.
Uzimele obekwe ngaphansi iphrofayli metal ulula. Into esemqoka nalokhu - ukuthobela ilungiselelo ovundlile izici uma kuziwa izindonga, kanye mpo, uma uhlelo efakwe ophahleni. Uma uphatha kahle isimiso ukufakwa, ngesikhathi esilandelayo uma ukulungisa uzokwazi sokuthola izixazululo eyinkimbinkimbi esengeziwe uhlobo ezimbili-level Uphahla lwangaphakathi, neminyango ngesimo nemengamo. Lapho iphrofayili metal ngezandla owakhe unezikhinsi, ukwenza ikusasa ngisho nangaphezu kwabo bonke base ungasebenzisa pads of plasterboard.
Peskosolyanoy ingxube - Ukulungiselela, isicelo kanye nezici
Lokhu iraba eluhlaza okunokwethenjelwa futhi enza izinto ezihlukahlukene
Odinga ukukwazi mayelana emnyango ongaphambili.
Perforated ophahleni: incazelo kanye nezinhlobo
Yini odinga ukukwazi ngaphambi uthenga i conditioner emoyeni?
Inqubo Legisaktsionny e komthetho wamaRoma: incazelo essence definition
Sitolo sekudla lokuphekiwe "Tokyo City": ngezibuyekezo nezithombe
Ebusuku ukukhanya wokudlala - sokwehlisa falling ubuthongo elele futhi unempilo
Ukupheliswa izibopho emthethweni civil
Kungenzeka ngosuku lokuqala lwenyanga ukukhulelwa? Ngingathola abakhulelwe esesikhathini?
Osteomyelitis bone - hhayi umusho
Big Amazwe Eight
House for namakati. Ukubukwa nezincomo ukukhetha
Indlela ukunqoba amadoda. Izimfihlo Simple Seduction